कालापानी छिर्दै चिनियाँ सेना (भिडियो) - Sabal Post
तथ्य र प्रमाण चाहिन्छ । केको आधारमा हामीले कालापानीमा सीमा छुट्याउने त ? तथ्य र प्रमाण छन् । जतिबेला महाकाली सन्धि भयो । त्यसबेला ठूलो वि’वाद भयो । संसदको संयुक्त समिति गठन भयो । रामचन्द्र पौडेल त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो सभामुखको हैसियतले । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट भरतमोहन अधिकारी जो अहिले हामीबीच हुनुहुन्न, उहाँ, सुवास नेम्वाङ र म थियौँ । हामीले अरू राजनीतिक दलका सांसदहरू सँगसँगै रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कालापानी भ्रमण गर्यौँ । हेलिकप्टरबाट हामीले नाभी, गुञ्जी र गज्र्याङ हेर्यौँ र जहाँ भारतीय सेनाको क्याम्प बनाइएका भवनहरू थिए ।
त्यस नजिकै हेलिकप्टर अवतरण गरेर सबै कुरा अध्ययन गर्यौँ । त्यहाँबाट आएपछि एउटा धारणा बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ । तर त्यसबेलाको सरकार अस्थिर थियो । कसैले पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । ऐतिहासिक तथ्य काली नदी दुई देशबीचको सीमाना हो भन्ने सुगौली सन्धिले नै भनेको छ । त्यहाँ गएर खुला आँखाले हेर्यो भने लिम्पियाधुराबाट काली नदीको शिर देखिन्छ । तर मलाई त्यहाँ पुगेपछि आश्चर्य के लाग्यो भने जहाँ भारतीय सैनिक क्याम्प थियो, त्यसको नजिकै एउटा सानो नाप्दा ८ फुट चौडा र ८ फुट लम्बाइ पनि छ छैन तिरतिरे धारा थियो । त्यसैलाई काली नदी निस्किएको हो भनेर भारतले भनेको भन्ने हामी सुन्छौँ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?
यो नचाहिने कुरा हो । त्यो सम्झौता त छँदैछ । व्यवहार पनि हेरौँ न । २०१८ सालसम्म त त्यहाँको नापी र तिरोलगायतका सबै चीज भएकै छ । जब १९६२ सालमा भारत र चीनको यु’द्ध भयो, त्यसबेला ज’बर्जस्ती भारतीय सेना त्यहाँ आए । त्यो सेनालाई फर्केर जा भनेर तत्कालीन शासकहरूले भनेनन् । त्यो सबभन्दा ठूलो त्रुटि थियो । त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्था थियो, अरूले भन्ने कुरा भएन । जब पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार आएपछि ज’बर्ज’स्ती राखिएका सेना फिर्ता लैजाऊ भन्न सक्नुपथ्र्यो, उसले भनेन । तर २०५२ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दिल्लीमा गएर हामीले असमान सन्धि र अति’क्रम’ण हटाऊ भन्यौँ । हामी नौ महिनामै हट्यौँ । त्यसपछि देशमा द्व’न्द्व सुरु भयो । ५५ मा फेरि काँग्रेसको बहुमतको सरकार आयो । बहुमतको सरकार भएको बेला न यस्ता कुरा भन्न सक्छ उसले पनि भनेन । पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका सम्पूर्ण सरकार पनि कामचलाउ थिए । तर यो सरकार स्थायीत्व प्राप्त गरेर नेपाली जनताले यत्रो जनादेश दिएपछि यसबारे कुरा गर्नुपर्यो मेरो भनाइ त्याहाँ छ ।
पूर्णबहादुर खड्का द्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस
अनियमितता गरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षविरुद्ध…